Sirdoonka macmal ah ... sirdoon leh!
kala furfuri hadalka agagaarka AI si aad uga gudubto fikradaha horay loo sii qaatay una gudub su'aalaha lagu tiirsado si loo fahmo,
maamusho barnaamijyada AI si aad u samaysato ra'yi naftaada,
wadaaga dhaqanka ugu yar mawduuca, si aad u barato mawduuca ka baxsan fikradaha la helay,
kala hadal mawduuca, codsiyadeeda, qaab-dhismeedkeeda iyada oo la adeegsanayo interlocutors kala duwan si ay gacan uga geystaan ​​dhismaha codsiyada AI
Ma ka baqaysaa AI? Meesha oo dhan ma ka maqashaa? Dadku miyay ku fiican yihiin beerta qashinka? Laakiin waa maxay sirdoonka macmal ah? Class'Code IAI waa muwaadin Mooc ay heli karaan dhammaan da'da 7 ilaa 107 si ay su'aalo, tijaabiyaan oo ay fahmaan waxa sirdoonka macmal ah...
Sirdoonka macmal ah… oo leh sirdoon! Diisambar 18, 2021Tranquillus
READ Qeexida kala duwanaanta
horeHordhac makaanikada dareeraha
socdaCilmi-baaris dib loo soo saari karo: mabaadi'da hab-raac ee sayniska hufan
Waa kuwee xirfadlayaasha ay tahay inay soo bandhigaan kaadhka tallaalka ilaa Janaayo 24, 2022?